မန္တလေးမှာ ဖြစ်သွားတာတဲ့ဗျာ။ မသိနားမလည်တဲ့သူတွေကို ဒီလိုတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး - Cele Platform
မန္တလေးမှာ ဖြစ်သွားတာတဲ့ဗျာ။ မသိနားမလည်တဲ့သူတွေကို ဒီလိုတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး
September 12, 2019 Ko Toe Local News 0
ဒီနေ့ နေ့ခင်း ၃ နာရီလောက်မှာ မန္တလေးမြို့ထဲ ၂၉ လမ်း ၈၃ လမ်းထောင့် မျိုးသိန်းလျှပ်စစ်ပစ္စည်းစင်တာဆိုင်ရှေ့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်နေတာတွေ့ရ ” ကိုယ်ကလည်း အဲ့ဒီစင်တာမှာ ဈေးဝယ်လိုက်ပို့ရဆိုတော့ အလုံးစုံကိစ္စ သိလိုက်ရတယ် ” မျိုးသိန်းစင်တာဆိုင်က ၂၉ လမ်း မျက်နှာခြင်းဆိုင် နှစ်ဆိုင်ရှိတာ ” အကြောင်းရင်းကတောင်ဘက်ဆိုင်ဈေးလာဝယ်တဲ့ အညာဘက်က ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့ကားကို စည်ပင်က ဖမ်းတာတဲ့ဖမ်းတာတဲ့
” ဖမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းက မျဉ်းအနီတစ်ဝက် မျဉ်းအဝါတစ်ဖက်ကားကိုရပ်လို့ပါတဲ့ ” ဖမ်းတဲ့စည်ပင်ကားက ရဲ တစ်ယောက်ပါတယ် စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေ ၈ ယောက်လောက်ပါတယ် ဘုန်းကြီးက ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အတွက် အဲကိုလာ လာဝယ်တာတဲ့ အလှူရှင်က ငွေဘဲလှူလိုက်တာမို့ ရွာထဲက ဟိုက်ဂျက်ကားကို အကူညီတောင်းခေါ်လာတာတဲ့ မောင်းတဲ့သူကလည်း အခြားရွာသားတစ်ဦးကို ခေါ်လာရတာပါတဲ့ ” ရပ်ထားတာကလည်း ခဏဘဲရှိသေး ဆိုင်က လုံခြုံရေး ကားဆိုင်ကယ်နေရာ စီစဉ်ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းက ရတယ် ဒီနားရပ်ဆိုလို့ ရပ်တာပါတဲ့ ” မျဉ်းနီကလည်း ကားတစ်ဝက်ဘဲ နင်းရပ်မိထားတာမို့ တောင်းပန်ရှာတယ် ”
ရဲနဲ့စည်ပင်က မရဘူးတဲ့ ဖမ်းတဲ့စလစ်ရောင်ပြန်ကားကိုကပ်ပြီးသွားတာကြောင့် ရုံးလိုက်ရွေးပါတဲ့ ဒဏ်ကျေး ငါးသောင်း လိုက်ဆောင်ပါတဲ့ ” ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးက ငါးသောင်းတော့မလုပ်နဲ့ကွာတဲ့ ကားသမားနဲ့ငါနဲ့အအေးဖ်ိုးတစ်သောင်းခွဲကျန်သေးတယ် ဒါနဲ့လက်ခံပါ ဒီနားတင်ကျေနပ်ပေးပါပေါ့ ခခယယ” တောင်းပန်နေရှာတယ် ” စီးပွါးရေးဘုန်းကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ဆရာတော်ကြီးအတွက် အလှူရှင်က လှူလို့လာဝယ်တာပါတဲ့ ” ကားသမားကကော ဘုန်းကြီးကကော ခခယယတောင်းပန်နေရှာတယ် ” ပါလာတဲ့ရဲတစ်ယောက်နဲ့စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေက ကားပေါ်ကတောက်မဆင်းဘဲ ဖုန်းဂိမ်းနှိပ် fb နှိပ်မပျက်ဘဲ ပမာမခန့်ပုံစံနဲ့ အင်းမလုပ် အဲမလုပ်”
ကျနော့်ကားဘေးရပ်ထားပြီး ရုံးလည်းမောင်းမသွား ကားပေါ်လူတွေထိုင်နေပြီး အကြာကြီးရပ်ထားတယ် ဒါနဲ့ ဘုန်းကြီးနဲ့ကားသမားက ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေကို ဆိုင်တာဝန်ခံမေးတယ် မဖြေရှင်းပေးကြဘူး အမှန်ဆို သူတို့ဆိုင်ဈေးဝယ်လာသူဘဲ မလွတ် တလွတ်မရပ်ရဘူး အစကတည်းက ပြောပါလား — ဘုန်းကြီးနဲ့ကားသမားခမျှာ ပြာယာခတ်နေကြရှာ ရွာကနေ အဲကိုလာ လာဝယ်တာ ရွာကိုဘယ်လိုပြန်မလည်း ငှါးလာတဲ့ကားပိုင်ရှင်ကို ဘယ်လိုရှင်းပြရမလည်း ဒဏ်ကြေးပိုက်ဆံကလည်း မပြည့်ဘူးကွာတဲ့ ညည်းနေကြရှာတယ် ”
ကိုယ့်မှာလည်း လက်ထဲငွေကမပါ ပေါင်းမှလေးထောင်လားပါတာဆိုတော့ မကူညီနိုင် — မနေနိုင်တော့ ဝင်ပြောမိတယ် ကားတစ်ဘီးထဲ လွန်ရပ်မိတာဘဲဗျာလို့ — အဆင်ပြေအောင်ကူညီလိုက်ပါလို့ပြောတော့ ဘာမှပြန်မပြောကြဘဲ မှုန်တေတေနဲ့ဂရုမစိုက်သလို ဆက်ဆံခံရတယ် — ဒါနဲ့သူတို့ကိုမေးလိုက်တယ် မျဉ်းနီကြားရပ်လို့ ဖမ်းတယ်ဆိုရင် ဟ်ိုမှာ မျဉ်းနီအပြည့်ကြားရပ်ထားတဲ့ စလွန်းကားလည်း သွားဖမ်းလေဗျာလို့ ” ၈၃ လမ်းအနောက်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက် လမ်းဘဲခြားနေတာ ဒီဘက်က ဈေးဝယ်ကားကြဖမ့်းပြီး ဟိုဘက်မှာ ကျောက်ချရပ်ထားတဲ့စလွန်းကားက်ို သွားဖမ်းလေဗျာဆိုတော့ အင်းမလုပ် အဲမလုပ်ကြ အဲ့ကား ရပ်ထားတာ ကျုပ်ဒီဆိုင်ရောက်ချိန်အရ နာရီဝက် မကတော့ဘူး ဖမ်းလေဗျာလို့ ”
အခုဘုန်းကြီးကားက အခုရပ် အခုဆင်းဝယ် အခုပြန်ထွက်လာတာ ခဏလေး ” စည်းကမ်းနဲ့မညီလို့ဖမ်းတယ်ဆို ဟိုကားလည်းဖမ်းပါ ဆိုတော့ ဘာမှပြန်မပြောကြဘူး — ဒီထက်ဆိုးတာဖမ်းအုံးမယ်ဆို လိုက်ခဲ့ကျနော်ပြမယ် ဒီ ၂၉ လမ်း ၈၄ လမ်းဆုံ မျဉ်းနီကြား လမ်းနှစ်ဆင့် ယဉ်နှစ်ထပ်မက လိုင်းကားတွေကျောက်ချရပ်ထားတာ ဖမ်းမလား ကျုပ်လိုက်ပြမယ် နောက်ထပ် ဖမ်းအုံးမလား ဒီအလာတုန်းက ၃၅ လမ်း ၈၄ လမ်းမီးပွိုင့်နား မျဉ်းအနီတည့်တည့် လမ်းအလယ်သံဇကာကြားတင် ကျောက်ချရပ်ထားတဲ့ လိုင်းကားတွေဖမ်းအုံးမလားလို့ မေးတော့ မဖြေပြန်ဘူး ဒုလက်ထောက်တာဝန်ခံဆိုသူရဲ့နာမည်ရေးမှတ်ထားပြီး ဓာတ်ပုံအချို့ရိုက်ယူထားလိုက်တယ်
” အေးလေ သူတို့လက်ထဲက စည်းကမ်းပေါ့ဆိုပြီး အရှင်ဘုရား ရုံးသာလိုက်ရှင်းပါ စိတ်အေးအေးထားပါ ရုံးမှာနားလည်အောင်ရှင်းပြရင် ငါးသောင်း ကျခြင်မှကျမှာပါလို့ —လျှောက်လိုက်ရတယ် ဒါလည်း အဲ့ဒီစည်ပင်ကားက ဘယ်မှမသွား အဲ့နားတင်ပေရပ်နေဆဲ ” နောက်ဆုံး အတော်ကြာသွားတော့ ဘုန်းကြီးခမျှာ ဆိုင်ကဝယ်ပြီးသား အဲကိုလာကြီး ကားပေါ်ကချကာ ဆိုင်ထဲပြန်ဝင်သွားတယ် ” ခဏနေတော့ လက်ထဲတစ်သောင်းတန်လေးတွေကိုင်လာပြီး စည်ပင်ကားဆီပြန်လာတယ် ” ကားရှေ့ခန်းက ဝန်ထမ်းဆီပေးလိုက်မှ သူ့ရဲ့ကားလေးကို လော့ခတ်ထားတာကို ပြန်ဖြုတ်ပေးကြတယ် ” ဒဏ်ကြေးလည်းရရော ဝေါခနဲမောင်းထွက်သွားပုံက မြို့ထဲသတ်မှတ်မိုင်နှုံး ၃၀ ရဲ့အထက်ပါဘဲ ”
ပြောခြင်တာက စည်းကမ်းအရဖမ်းတာဆို ဖမ်းပါ ” တစ်ကယ့်လမ်းကျပ်စေမဲ့ နေရာတွေကိုကျ လွှတ်ပေးထားပြီး တောကတက်လာတဲ့ရိုးသားသူတွေအပေါ် ချနင်းတာတော့ အဆင့်ကျော်နေတယ်ထင်တယ် ” အခုဖမ်းတဲ့နေရာဟာ မျဉ်းနီတစ်ဝက်ထိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ ယဉ်ကျောအရဆောဒကတက်ပြရမယ်ဆိုရင် လုံးဝအလွတ်ကြီးပါဘဲ ” နောက်တစ်ခုပြောခြင်တာကမျဉ်းနီရပ်ရင် ဒဏ်ကြေးက ငါးသောင်းတဲ့လား ? အဲ့ဒီဒဏ်ကြေးငါးသောင်းက နိုင်ငံ့ဘဏ္ဏာထဲကို မှန်မှန်ကန်ကန်အပြည့်အဝ ရပါရဲ့လား ? မျဉ်းနီဖမ်းတဲ့စီမံကိန်းက ကားရွေးပြီး ဖမ်းတာလား ? စည်းကမ်းဆိုတာ ညီမျှဖို့လည်း အထူးလိုအပ်ပါတယ် ” မြို့တော်ဝန်ကြီးက ကောင်းပါတယ် အချို့ ဝန်ထမ်းတွေကတော့ လိုနေသေးသလားလို့ ”လောကပါလ
ဒီနေ့ နခေ့ငျး ၃ နာရီလောကျမှာ မန်တလေးမွို့ထဲ ၂၉ လမျး ၈၃ လမျးထောငျ့ မြိုးသိနျးလြှပျစဈပစ်စညျးစငျတာဆိုငျရှေ့ ရုတျရုတျသဲသဲဖွဈနတောတှရေ့ ” ကိုယျကလညျး အဲ့ဒီစငျတာမှာ ဈေးဝယျလိုကျပို့ရဆိုတော့ အလုံးစုံကိစ်စ သိလိုကျရတယျ ” မြိုးသိနျးစငျတာဆိုငျက ၂၉ လမျး မကျြနှာခွငျးဆိုငျ နှဈဆိုငျရှိတာ ” အကွောငျးရငျးကတောငျဘကျဆိုငျဈေးလာဝယျတဲ့ အညာဘကျက ဘုနျးကွီးတဈပါးရဲ့ကားကို စညျပငျက ဖမျးတာတဲ့
” ဖမျးရတဲ့အကွောငျးရငျးက မဉျြးအနီတဈဝကျ မဉျြးအဝါတဈဖကျကားကိုရပျလို့ပါတဲ့ ” ဖမျးတဲ့စညျပငျကားက ရဲ တဈယောကျပါတယျ စညျပငျဝနျထမျးတှေ ၈ ယောကျလောကျပါတယျ ဘုနျးကွီးက ကြောငျးထိုငျဆရာတျောအတှကျ အဲကိုလာ လာဝယျတာတဲ့ အလှူရှငျက ငှဘေဲလှူလိုကျတာမို့ ရှာထဲက ဟိုကျဂကျြကားကို အကူညီတောငျးချေါလာတာတဲ့ မောငျးတဲ့သူကလညျး အခွားရှာသားတဈဦးကို ချေါလာရတာပါတဲ့ ” ရပျထားတာကလညျး ခဏဘဲရှိသေး ဆိုငျက လုံခွုံရေး ကားဆိုငျကယျနရော စီစဉျပေးတဲ့ဝနျထမျးက ရတယျ ဒီနားရပျဆိုလို့ ရပျတာပါတဲ့ ” မဉျြးနီကလညျး ကားတဈဝကျဘဲ နငျးရပျမိထားတာမို့ တောငျးပနျရှာတယျ ”
ရဲနဲ့စညျပငျက မရဘူးတဲ့ ဖမျးတဲ့စလဈရောငျပွနျကားကိုကပျပွီးသှားတာကွောငျ့ ရုံးလိုကျရှေးပါတဲ့ ဒဏျကြေး ငါးသောငျး လိုကျဆောငျပါတဲ့ ” ဒါနဲ့ဘုနျးကွီးက ငါးသောငျးတော့မလုပျနဲ့ကှာတဲ့ ကားသမားနဲ့ငါနဲ့အအေးဖိုးတဈသောငျးခှဲကနျြသေးတယျ ဒါနဲ့လကျခံပါ ဒီနားတငျကနြေပျပေးပါပေါ့ ခခယယ” တောငျးပနျနရှောတယျ ” စီးပှါးရေးဘုနျးကွီးလညျးမဟုတျပါဘူးတဲ့ ဆရာတျောကွီးအတှကျ အလှူရှငျက လှူလို့လာဝယျတာပါတဲ့ ” ကားသမားကကော ဘုနျးကွီးကကော ခခယယတောငျးပနျနရှောတယျ ” ပါလာတဲ့ရဲတဈယောကျနဲ့စညျပငျဝနျထမျးတှကေ ကားပျေါကတောကျမဆငျးဘဲ ဖုနျးဂိမျးနှိပျ fb နှိပျမပကျြဘဲ ပမာမခနျ့ပုံစံနဲ့ အငျးမလုပျ အဲမလုပျ”
ကနြေျာ့ကားဘေးရပျထားပွီး ရုံးလညျးမောငျးမသှား ကားပျေါလူတှထေိုငျနပွေီး အကွာကွီးရပျထားတယျ ဒါနဲ့ ဘုနျးကွီးနဲ့ကားသမားက ဆိုငျကဝနျထမျးတှကေို ဆိုငျတာဝနျခံမေးတယျ မဖွရှေငျးပေးကွဘူး အမှနျဆို သူတို့ဆိုငျဈေးဝယျလာသူဘဲ မလှတျ တလှတျမရပျရဘူး အစကတညျးက ပွောပါလား — ဘုနျးကွီးနဲ့ကားသမားခမြှာ ပွာယာခတျနကွေရှာ ရှာကနေ အဲကိုလာ လာဝယျတာ ရှာကိုဘယျလိုပွနျမလညျး ငှါးလာတဲ့ကားပိုငျရှငျကို ဘယျလိုရှငျးပွရမလညျး ဒဏျကွေးပိုကျဆံကလညျး မပွညျ့ဘူးကှာတဲ့ ညညျးနကွေရှာတယျ ”
ကိုယျ့မှာလညျး လကျထဲငှကေမပါ ပေါငျးမှလေးထောငျလားပါတာဆိုတော့ မကူညီနိုငျ — မနနေိုငျတော့ ဝငျပွောမိတယျ ကားတဈဘီးထဲ လှနျရပျမိတာဘဲဗြာလို့ — အဆငျပွအေောငျကူညီလိုကျပါလို့ပွောတော့ ဘာမှပွနျမပွောကွဘဲ မှုနျတတေနေဲ့ဂရုမစိုကျသလို ဆကျဆံခံရတယျ — ဒါနဲ့သူတို့ကိုမေးလိုကျတယျ မဉျြးနီကွားရပျလို့ ဖမျးတယျဆိုရငျ ဟိုမှာ မဉျြးနီအပွညျ့ကွားရပျထားတဲ့ စလှနျးကားလညျး သှားဖမျးလဗြောလို့ ” ၈၃ လမျးအနောကျဘကျနဲ့အရှဘေ့ကျ လမျးဘဲခွားနတော ဒီဘကျက ဈေးဝယျကားကွဖမျ့းပွီး ဟိုဘကျမှာ ကြောကျခရြပျထားတဲ့စလှနျးကားကို သှားဖမျးလဗြောဆိုတော့ အငျးမလုပျ အဲမလုပျကွ အဲ့ကား ရပျထားတာ ကြုပျဒီဆိုငျရောကျခြိနျအရ နာရီဝကျ မကတော့ဘူး ဖမျးလဗြောလို့ ”
အခုဘုနျးကွီးကားက အခုရပျ အခုဆငျးဝယျ အခုပွနျထှကျလာတာ ခဏလေး ” စညျးကမျးနဲ့မညီလို့ဖမျးတယျဆို ဟိုကားလညျးဖမျးပါ ဆိုတော့ ဘာမှပွနျမပွောကွဘူး — ဒီထကျဆိုးတာဖမျးအုံးမယျဆို လိုကျခဲ့ကနြျောပွမယျ ဒီ ၂၉ လမျး ၈၄ လမျးဆုံ မဉျြးနီကွား လမျးနှဈဆငျ့ ယဉျနှဈထပျမက လိုငျးကားတှကြေောကျခရြပျထားတာ ဖမျးမလား ကြုပျလိုကျပွမယျ နောကျထပျ ဖမျးအုံးမလား ဒီအလာတုနျးက ၃၅ လမျး ၈၄ လမျးမီးပှိုငျ့နား မဉျြးအနီတညျ့တညျ့ လမျးအလယျသံဇကာကွားတငျ ကြောကျခရြပျထားတဲ့ လိုငျးကားတှဖေမျးအုံးမလားလို့ မေးတော့ မဖွပွေနျဘူး ဒုလကျထောကျတာဝနျခံဆိုသူရဲ့နာမညျရေးမှတျထားပွီး ဓာတျပုံအခြို့ရိုကျယူထားလိုကျတယျ
” အေးလေ သူတို့လကျထဲက စညျးကမျးပေါ့ဆိုပွီး အရှငျဘုရား ရုံးသာလိုကျရှငျးပါ စိတျအေးအေးထားပါ ရုံးမှာနားလညျအောငျရှငျးပွရငျ ငါးသောငျး ကခြွငျမှကမြှာပါလို့ —လြှောကျလိုကျရတယျ ဒါလညျး အဲ့ဒီစညျပငျကားက ဘယျမှမသှား အဲ့နားတငျပရေပျနဆေဲ ” နောကျဆုံး အတျောကွာသှားတော့ ဘုနျးကွီးခမြှာ ဆိုငျကဝယျပွီးသား အဲကိုလာကွီး ကားပျေါကခကြာ ဆိုငျထဲပွနျဝငျသှားတယျ ” ခဏနတေော့ လကျထဲတဈသောငျးတနျလေးတှကေိုငျလာပွီး စညျပငျကားဆီပွနျလာတယျ ” ကားရှခေ့နျးက ဝနျထမျးဆီပေးလိုကျမှ သူ့ရဲ့ကားလေးကို လော့ခတျထားတာကို ပွနျဖွုတျပေးကွတယျ ” ဒဏျကွေးလညျးရရော ဝေါခနဲမောငျးထှကျသှားပုံက မွို့ထဲသတျမှတျမိုငျနှုံး ၃၀ ရဲ့အထကျပါဘဲ ”
ပွောခွငျတာက စညျးကမျးအရဖမျးတာဆို ဖမျးပါ ” တဈကယျ့လမျးကပျြစမေဲ့ နရောတှကေိုကြ လှတျပေးထားပွီး တောကတကျလာတဲ့ရိုးသားသူတှအေပျေါ ခနြငျးတာတော့ အဆငျ့ကြျောနတေယျထငျတယျ ” အခုဖမျးတဲ့နရောဟာ မဉျြးနီတဈဝကျထိနတေယျဆိုပမေဲ့ ယဉျကြောအရဆောဒကတကျပွရမယျဆိုရငျ လုံးဝအလှတျကွီးပါဘဲ ” နောကျတဈခုပွောခွငျတာကမဉျြးနီရပျရငျ ဒဏျကွေးက ငါးသောငျးတဲ့လား ? အဲ့ဒီဒဏျကွေးငါးသောငျးက နိုငျငံ့ဘဏ်ဏာထဲကို မှနျမှနျကနျကနျအပွညျ့အဝ ရပါရဲ့လား ? မဉျြးနီဖမျးတဲ့စီမံကိနျးက ကားရှေးပွီး ဖမျးတာလား ? စညျးကမျးဆိုတာ ညီမြှဖို့လညျး အထူးလိုအပျပါတယျ ” မွို့တျောဝနျကွီးက ကောငျးပါတယျ အခြို့ ဝနျထမျးတှကေတော့ လိုနသေေးသလားလို့ ”လောကပါလ
Victoria အမှုတရားခံအဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ အောင်ကြီးရဲ့ ရှေ့နေ ခြိမ်းခြောက်ခံရမှုများရှိနေဟုဆို
ဆယ်နှစ်ကျော်ကိုင်လာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကို မိုးအောင်ရင်အကုန်မှတ်ထားတဲ့အတွက် တအံ့တသြဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ နန်းဆု